Nhau - Zvinhu zvina zvinoda kutariswa mukushandiswa kwemajammer efoni ekuchengetedza chiratidzo mumusangano
Zvinhu zvina zvinoda kutariswa pakushandiswa kwejammers dzenharembozha yekudzivirira chiratidzo mumusangano
Parizvino, pane akawanda mabhenji enharembozha jammers pamusika, asi iwo akapatsanurwa akapatsanurwa kuita maviri mapoka: enjiniya michina uye zvakajairika michina. Seizvo zita rinoratidzira, michina yeinjiniya inowanzo shandiswa kune akakwirira-kudiwa uye epamusoro-mapurojekiti. Hunhu hwavo hunoda kuita kwakadzikama, basa rinoenderana zvinoenderana ne-pa-saiti nharaunda nharaunda, uye maawa makumi maviri nemaviri kushanda kusingamisikidzwa. Mafoni akajairwa zvishandiso izvo zvinowanzo shandiswa kwenguva pfupi kwenguva pfupi. Kuita kwavo hakuzivikanwe, izvo zvinogona kukanganisa chiratidzo chevamwe kuti vashandise nharembozha, uye zvinogona zvakare kuvharira nzvimbo yaunoda kuvharira asi isingakwanise kuitiswa.
Kazhinji hapana vanhu vazhinji mukamuri yemusangano, uye vanhu vanoungana chete kana vachida kuita musangano, uye panguva imwechete, pane mamiriro apo nharembozha dzinoungana. Panguva yemusangano, zvingangoita kuti foni yemunhu uyu iridze kwechinguva, uye munhu iyeye anorira kwechinguva. Naizvozvo, zvakafanira kwazvo kumisikidza musangano wekamuri nhoo. Kune rimwe divi, rinocheka kupindira kwefoni mbozha kumusangano, uye kune rimwe divi, inogona zvakare kubatsira zvakavanzika zvakavanzika zvemukati memusangano.
Saka, ndeapi matanho ekuzvisarudzira pakusarudza nharembozha jammers yekuratidzira chiratidzo mumakamuri emusangano?
1. Sarudza chishandiso chinodzivirira kubva kune anogadzira zvigadzirwa, kunyanya nemubvunzo wekuyedza wakaburitswa nebazi rezve Runyararo.
Chechipiri, kuitira kuti uve nechokwadi chekushanda kwekudzivirira, edza kushandisa michina yeinjiniya, senge michina inotakurika yeinjiniya, iyo inogona kuvhurwa painodiwa, uye inogona kuvharwa mushure mekushandisa;
3. Usati wagadzwa, edza kuva nenyanzvi dzinoedza pa-saiti nharembozha kuti unyatsovadzivirira pasina kukanganisa vamwe kana kutambisa simba;
Chechina, unobhadhara chaunobhadhara. Kana bhajeti ichibvumidza, edza kusarudza michina yemhando yepamusoro, iyo inogona kuponesa matambudziko mazhinji asina basa.